लण्डन पुगेर कपाल काट्दा रोइन् पूजा, आकाश र सोनमसँग रोमान्स गर्न बनाइन् कोरियन लुक्स, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
लण्डन पुगेर कपाल काट्दा रोइन् पूजा, आकाश र सोनमसँग रोमान्स गर्न बनाइन् कोरियन लुक्स
काठमाडौँ । आखिर लण्डन पुगेर आफ्नो गेटअप बदल्दै नायिका पुजा शर्माले किन काटिन् कपाल ? आज हामी यस भिडियोमा यसै विषयमा केन्द्रित रही विशेष खुलासा गर्नेछौँ ।
केही दिन अघि मात्र चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको छायाङ्कनको लागि भन्दै नायिका पुजा शर्मा र नायक सोनम तोप्डेनको साथमा नायक आकाश श्रेष्ठ लण्डन उडेका थिए । तर, त्यो भन्दा अघि नै नायक निर्देशक सुदर्शन थापा लण्डन पुगिसकेका थिए ।
लण्डनमा चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको छायाङ्कन सुरु भइसकेको छ र करिब ५० दिनको छायाङ्कन सेडुलको साथमा यसको छायाङ्कन सुरु गरिएको छ । र प्राप्त जानकारी अनुसार सिनेमाको पहिलो टेक दिएका छन् नायिका पुजा शर्मा र नायक सोनम तोप्डेनले ।
नायिका पुजा शर्मा र नायक सोनम तोप्डेनको जोडी कस्तो देखिएको छ भन्ने कुरा पछि थाहा पाउनुहुनेछ भने हाल सुटिङको पहिलो टेकमा पुजा र सोनम कुर गर्ने क्रममा केही रोमान्टिक देखिएका छन् । जुना मुस्कुराइरहेकी देख्न सकिन्छ । तर त्यो भन्दा पनि नायिका पुजा शर्माको कपालमा आएको परिवर्तन र उनको कोरियन लुक्सको बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।
चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको लागि नायिका पुजा शर्माले आफ्नो कपाल समेत काटेकी छन् । उनले आफ्नो कपाल छोट्याएकी छन् । कपाल छोट्याएर उनी कोरियन लुक्समा देखिएका छन् । नायिका शर्मालाई यस अघिका फिल्महरूमा जुन खालका गेटअपहरुमा देखिन्थिन् त्यो भन्दा बाहिर आएर उनले बिल्कुलै नयाँ लुक्स दिएकी छन् यस फिल्म सम्हालिन्छ कहिले मनमा ।
थप तथा पूरा जानकारीको लागि हिट नेपालले तयार पारेको यो भिडियो रिपोर्ट हेर्नुस् :